Gumi emhando dzakanakisa qwerty mafoni emafoni kubva panguva yeakakosha kiyibhodhi yaitonhora
Kuru Nhau & Ongororo Gumi emhando dzakanakisa dzeQWERTY mafoni emafoni kubva panguva dzezvikwangwani zvehurdware zvaitonhorera
Kuvhura gare gare mwedzi uno, iyo Android-yakavakirwa BlackBerry Priv inouya nechimwe chinhu chatisingawanzo kuona pane emhando yepamusoro mafoni mazuva ano: Hardware QWERTY keyboard. Kutora mukana weakawanda-anobata maOS uye ekuratidzira emhando yepamusoro, vagadziri vazhinji vemaoko vakadonhedza kiyi yemahara zvachose, kunyangwe hazvo vamwe vashandisi vangave vachiri kuzvida.
Kuona kuti iyo Priv iri kuuya nekukurumidza, takarohwa nechishuwo uye tikayeuka mazhinji eakakura maQWERTY-akashongedzerwa mafoni akaburitswa mumakore ese, kutanga anopfuura gumi apfuura. Joinha isu pazasi mukutora nekukurumidza kunovatarisa, ucha Mukurongeka kwezviitiko:
Yakaburitswa makore anopfuura gumi apfuura (muna 2004, kuti ive chaiyo), iyo P910 yaive yepamusoro-soro Sony Ericsson smartphone iyo yakatsiva iyo P900 kubva gore rimwe rapfuura, uye iyo P800 kubva muna 2002. Inomhanya Symbian UIQ, iyo Sony Ericsson P910 yakapa 2.9-inch resistive touchscreen inoratidzira ine 208 x 320 pixels, chinyoreso chinyoreso, VGA yekumashure kamera, uye 1000 mAh bhatiri. Zvimwe zvezvinhu izvo zvakafanotangira hazvina kuzviita & apos; zvinosanganisira 64 MB yeyemukati memory, rutsigiro rwekunze memori makadhi, uye HTML kubhurawuza. Iyo QWERTY keyboard yeiyo Sony Ericsson P910 yakavanzwa kune rumwe rutivi rayo yakajairwa, alphanumeric keyboard, ichizarurirwa nefiripi.
Nokia E90 Kutaurirana
Yechokwadi mini mini komputa yemakore gumi apfuura, iyo Nokia E90 Kutaurirana yakaunzwa muna 2007 kuti ibudirire iyo yakawanda (asi inorumbidzwa zvikuru) Nokia 9500 Kutaurirana kubva muna 2004. Kubva pa Symbian S60, iyo E90 yaive yekutanga mumatanho eCommunicator kuva ne3G uye GPS inogamuchira. Kufanana nemamwe mafoni mazhinji panguva iyoyo, iyo Nokia E90 Communicator yaive nemitambo miviri (yekunze neyemukati), pamwe nemakhibhodi maviri (zvakare ekunze nekunze). Iyo yekhibhodi yemukati yaive yakazara QWERTY imwe, nepo kuratidzwa kwemukati kwaiperekedza yaive 4-inch, 800 x 352 pixels imwe. Iyo E90 zvakare yaive neWi-Fi, 332 MHz imwechete musimboti processor, 128 MB yemukati memory, microSD kadhi rutsigiro, uye 3.2 MP yekumashure kamera.
Iyo inozivikanwa zvakare seAt & T Tilt, T-Mobile MDA Vario III, kana O2 XDA Stellar, iyo HTC TyTN II yakaburitswa muna 2007 sekuvandudza pamusoro peiyo yekutanga TyTN kubva 2006. Kufanana neyekutanga modhi, iyo HTC TyTN II yaive Windows Mobile nhare. ine 2.8-inch, 240 x 340 pixels resistive touchscreen inoratidzira, chinyoreso peni, uye inotsvedza QWERTY keyboard - yakanaka kwazvo, futi. 3G, Wi-Fi, GPS, 3.2 MP yekumashure kamera uye VGA yekumberi-yakatarisana kamera yaive zvakare mubhodhi.
Yekutanga muBlackBerry & apos; s mutsara weBold mafoni, iyo Bold 9000 yaive yekutanga kifaa chakaunzwa muna2008 - apo BlackBerry yaive imwe yepasirose & apos; s varidzi vepamusoro ve smartphone. Iyo 2.6-inch, 480 x 320 pixels skrini yeiyo Bold 9000 wasn & apos; t inobata-inonzwisisika, asi nharembozha yakanga iine yakazara yakazara QWERTY keyboard iyo yakaita typing mhepo. Zvimwe zvinhu zvaisanganisira trackball, kubatanidza 3G, Wi-Fi, GPS, 128 MB ye RAM, 1 GB yekuwedzera yekumusoro memory, 624 MHz single-core processor, uye 2 MP kumashure kamera.
T-Mobile G1 / HTC Kurota
Inowanikwa kubva muna Gumiguru 2008 (muUS), iyo T-Mobile G1 / HTC Kurota yakaita nhoroondo senyika & apos; yekutanga Android smartphone. Nechitarisiko chayo chakasarudzika, iyo G1 / Iroto yakanga isiri chaiyo yekubudirira, asi yakavhura nzira yezvakange zvoda kukurumidza kuve inonyanya kufarirwa smartphone OS kusvika zvino. Inotungamirwa ne588 MHz imwechete-musimboti CPU, iyo G1 yaive ne 3.2-inch HVGA (320 x 480 pixels) touchscreen kuratidza, uye inotsvedza QWERTY keyboard - zvakanyanya chaizvo, iyo skrini ndiyo yaive yakatsvedza kuratidza iyo keyboard. Chishandiso chakauya neese ekubatanidza maficha aive akajairwa kune inoremekedzwa smartphone panguva iyoyo (3G, Wi-Fi, GPS), pamwe ne192 MB ye RAM, 256 MB yemukati memory, microSD kadhi rutsigiro, uye 3.2 MP yekumashure kamera .
HTC Kubata Pro 2
Inotariswa nevakawanda seimwe yeakanakisa Windows Nharembozha yenguva yayo (2009), iyo HTC Kubata Pro2 (inozivikanwawo seTilt 2) yaive nekirabhu yakanaka yekutsvedza QWERTY keyboard ichiperekedzwa ne 3.6-inch, 480 x 800 pixels tilting touchscreen kuratidza. Iyo Kubata Pro2 zvakare yaive neinobata-inonzwisisika zoom bar, 288 MB ye RAM, 512 MB yekuwedzera inowanda memory, 528 MHz single-core processor, kuwedzera 3.2 MP uye VGA kamera (kumberi nekumberi, zvichiteerana).
HTC Kubata Pro2
Yakatangwa pakati pa2009 muUS, iyo Palm Pre yaive yepasi rose & apos; s yekutanga webOS smartphone - inomiririra kutanga kutsva kwePalm. Iyo yekutanga yakava mutengesi anopisa paSprint muUS, sezvo yaive smartphone yakagadzirwa zvine zvinhu zvinoyevedza, zvinosanganisira 3.1-inch, 320 x 480 pixels touchscreen kuratidza, uye mufananidzo unotsvedza-kunze kweQWERTY keyboard. Inotungamirwa ne600 MHz single-core processor, iyo Palm Pre yakapa 256 MB ye RAM uye 8 GB yekuchengetera nzvimbo, asi pakanga pasina microSD kadhi rutsigiro. Iyo Pre yaive nevateveri vazhinji (Pre Plus, Pre 2, uye Pre 3), asi izvi zvakakundikana kuwana mukurumbira. Pakupedzisira, Palm yakazotengeswa kuHP, nepo webOS yakawanikwa neLG, iyo yave kuishandisa kumaTV akangwara uye nemidziyo inopfeka.
Motorola Droid / Zvinokosha
Iyo yekutanga Motorola Droid (inozivikanwawo seMilestone - GSM musiyano) ingangodaro inorangarirwa zvakanyanya seyekutanga Android smartphone iyo yakashambadzirwa senge inoshanda iPhone imwe. Muna 2009, iyo iPhone yaive AT & T-yakasarudzika chishandiso muUS, saka zvakaita zvine musoro kuti Verizon kutsvaga imwe nzira. Uye yakawana yakakura mu Motorola & apos; s yekutanga Droid, ruoko rwakaburitswa mukupera kwa2009 rwakabatsirwa neiyo 'Droid Ino' mushandirapamwe wekushambadzira - waisimbisa zvinhu izvo iPhones zvaisakwanisa & apos; zvisingaite panguva iyoyo (sekuita zvakawanda). Zvichienzaniswa neiyo iPhone 3GS ya2009, iyo Droid yakanga iine sikirini hombe ine resolution yepamusoro yepikisi (3.7 inches, 480 x 854 pixels). Ehezve, ruoko rwakaratidzawo kutsvedza kweQWERTY keyboard.
Iyo Motorola Droid yaive nevakagamuchirwa zvakanaka vakatsiva. Muchokwadi, Verizon & apos; s Droid brand iri mupenyu uye ichiripo nhasi, kunyange pasina imwe yazvino mafoni ekuishandisa (senge iyo Droid Turbo kana Droid Maxx) inopa QWERTY makhibhodi.
Yakapihwa se 'internet piritsi', iyo Nokia N900 yakatanga kuziviswa muna2008, asi yakazongowanikwa munaNovember 2009. Pakati pezvimwe zvinhu, iyo N900 yakaratidza 3.5-inch touchscreen inoratidzira ine 480 x 800 pixels, mutsara we3 uchitsvedza QWERTY keyboard, uye 5 MP Carl Zeiss kumashure kamera. Chigadzirwa chacho chakarumbidzwa nekuda kwewebhu webhu, iyo yaisanganisira kutsigira Flash. Nekudaro, sezvo iyo N900 yakamhanya Maemo, pakanga pasina & apos; kune akawanda manyorerwo aanowanikwa. Pakupedzisira, Maemo akabatanidzwa neIntel & apos; s Moblin kuumba MeeGo - iyo yakagumiswa ichida Tizen. Parizvino, Jolla & apos; s Sailfish OS yakavakirwa pa MeeGo.
Imwe yazvino mafoni ekupedzisira-ekupedzisira ekumhanyisa iyo isingachashandi Symbian OS, iyo Nokia E7 yakaburitswa kutanga kwa2011, apo Nokia yakazivisa hurongwa hwekushandisa Microsoft & apos; s Windows Foni senzira yayo huru yekufambisa. Izvo zvoga zvakaita kuti E7 chishandiso icho vamwe vangangodaro vaizeza kutenga. Kunyangwe zvakadaro, iyo E7 yaive yakakurumbira ruoko, iine anodized aluminium muviri, 4-mutsara QWERTY keyboard, 4-inch AMOLED kuratidza ine 360 ​​x 640 pixels, uye 8 MP kumashure kamera.
Wakave uine chero mafoni eQWERTY? Ndeipi yawainyanya kufarira? Kana zvishoma kufarira?
6 inch nharembozha 2015
Iwe & apos; uchakurumidza kuzochengetedza Instagram Nhau semadrafti
Apple & apos; s iPhone 7 uye 7 Plus zviripo pa $ 144 pop ine zvirongwa zvezvikamu (nhasi chete)
OnePlus 3T mutengo uye zuva rekuburitsa
Yakaburitswa mukati meWalmart memo inonzi inoratidzira kukwira kwemutengo kweApple iPhone 6s (UPDATE: Walmart yakagadzira typo)
Linux ls Command - Chinyorwa Mafaira
Nhare dzakanakisa diki uye dzakabatana kutenga (2021)